Laptop ဝယ်ရင် အရေးကြီးဆုံး Processor ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ?
12 Oct 2018 . 5:19 PM
ကွန်ပျူတာလိုလို့ အရေးတကြီးပဲ ဝယ်ဝယ်၊ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီး အကြိုက်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာကိုပဲ သေချာရွေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ ဆန်းစစ်ကြည့်ပြီး The Best Choice ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
Dell XPS Core i3 Version
ပထမဦးဆုံး ကွဲကွဲပြားပြား ဖြစ်သွားစေချင်တာက ကိုယ်က Power User မလို့ Gamer မလို့ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက်ဆိုပြီး အကန့်လေး ခွဲစေချင်တာပါ။ ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကို အမျိုးစားခွဲပြရမယ်ဆိုရင် High-end ၊ Mid-range နဲ့ Budget ဆိုပြီး ၃ မျိုး ရှိတယ်ဆိုတာပါ။ အခုလို Level ၃ မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိသွားရင် High-end Build တွက်ဆင်မလား? သူ့အတွက်ဆိုရင် $1500 အထက်ရှိနိုင်မယ်၊ Mid-range ဆိုရင်တော့ $1000 ဝန်းကျင်ပေါ့၊ ရိုးရိုးပဲ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ $300 အောက်နဲ့ ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်နိုင်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမ်းကစားနိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးဆင်လို့ ရတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက် စေချင်ပါတယ်။
Razer Blade 15 Mercury White Edition
ကယ်… ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ Build အလိုက် ကွန်ပျူတာထဲက အစိတ်ပိုင်းတွေ ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ထဲမှာ Processor ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲဆိုတာ ပြောပြသွားပါ့မယ်။
ကွန်ပျူတာဝယ်ရင် ပထမဆုံး စိတ်ဝင်စားကြတာက CPU ခေါ် Processor ပါ။ သူကဘယ်လောက် အရေးပါသလဲဆိုရင် လူဦးနှောက်နဲ့ သဘောတရားချင်း သွားဆင်တူတယ်။ ဂိမ်းပဲကစားကစား၊ Rendering ပဲချချ၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် Processor Command မရှိရင် အသက်မဲ့နေတဲ့ လူတယောက်လိုပါပဲ။ ဒီလိုဆိုတော့ အရေးပါဆုံး Processor ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ကြမလဲ?
Core i7 or equivalent AMD Processor
Intel Processor ထဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံး Core i7 တွေကို Gaming Laptop ၊ Desktop တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့မှာပါလာတဲ့ Core အရေတွက် အများဆုံးရှိတာမလို့ Powerful ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရတာပါ။ တချို့ Ultra-powerful ကွန်ပျူတာတွေမှာ Core i9 Processor တွေ မြင်ရလေ့ရှိပြီး ဒီကောင်တွေက Render ကောင်းကောင်း ချဖို့အတွက် တမင်ဈေးကြီးကြီး ထုတ်ထားတဲ့ Processor ပါ။
ဒါကြောင့်မလို့ Core i7 ၊ Core i9 စတာတွေကို Power User တွေ နှစ်သက်ကြသလို High-end Build ဆင်ချင်တဲ့လူမှ ရွေးချယ်ကြတာပါ။ သာမန် ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက် မလိုအပ်သလို Game ကစားချင်သူတွေ ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက် ချွေတာလိုက်ပြီး ပိုပြီး Strong ဖြစ်တဲ့ Graphics Card ရွေးချယ်လိုက်တာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
Core i7 excels performance in gaming
Core i5 or equivalent AMD Processor
အလယ်လတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ Mid-range to High Performance ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Core i5 Processor တွေဟာ CPU သုံးဖို့ အရမ်းမလိုဘူး၊ ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ လုပ်ငန်းသုံးအတွက် သင့်တော်သလို Game ကစားချင်သူအတွက်လည်း Ready ဖြစ်နေတဲ့ Procesor ပါပဲ။
နောက်ပြီး Core i5 ကို ရွေးချယ်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ချက်က ရေရှည်မှာ ကြာကြာသုံးနိုင်သေးသလို အသစ်ထွက်လာမယ့် Software တွေကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ဦးမယ်ဆိုတာပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ ဘယ်အတွက်ပဲ ကွန်ပျူတာဝယ်ဝယ် Core i5 လောက်ဆွဲထားလိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ တချို့ Budget ပဲ မှန်းထားတဲ့သူ၊ ရံဖန်ရံခါပဲ ကွန်ပျူတာသုံးလေ့ရှိသူအတွက်က ဒီအချက် မစဉ်းစားလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
An ideal Processor for Mac Family
Core i3 or equivalent AMD Processor
Core i3 Processor တွေကတော့ Budget ကနေ Mid-Range ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာဆင်ဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါမယ့် Mid-range သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Quad Core i3 သွားတာထက် Core i5 ရွေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ သူ့ဘာသူ Generation မြင့်လို့ Core4လုံးပဲ ပါပါ Level ပိုမြင်တဲ့ Processor ရွေးချယ်လိုက်တာ ပြိုင်ကားနဲ့ လေယာဉ်စီးရသလို ကွာခြားမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက် ကွန်ပျူတာဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားရင် Core i3 အစား Core M ဒါမှမဟုတ် Pentium ၊ Celeron ၊ Atom Processor တွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့သလို Budget အဆင့်မှာ စကားပြောမယ့်အချက်က ငွေဘယ်လောက်သုံးနိုင်မလဲ အဓိက ဖြစ်သွားတာမလို့ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးနဲ့ အင်တာနက်၊ YouTube ဗီဒီယိုကြည့်တာမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ အမြင့်ဆုံး Core i3 ကနေ Atom Processor အထိ နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Core M for light weight Multi-tasking
ဒီိလို အကန့် ၂ ခု ခွဲလိုက်ရတယ်ဆိုတာက Laptop အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ Processor တွေမှာ ULV (Ultra Low Voltage) နဲ့ HQ (High Quaility) ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိနေလို့ပါ။ ဥပမာ 8th Generation Intel Core i7 Processor ထဲမှာဆိုရင် Core i7-8550U နဲ့ Core i7-8750H ဆိုပြီး မော်ဒယ် ၂ မျိုးခွဲထုတ်ထားပါတယ်။ ရှေ့ U ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ULV လို့ ရည်ညွန်းပြီး ပါဝါအစားနည်းတယ်၊ H ကတော့ Powerful လို့ ပြောချင်တာဖြစ်ပြီး ပါဝါပိုစားမယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းမယ်၊ U စီးရီးထက်စာရင် Core အရေတွက်လည်း ပိုများပါမယ်။
Two variant Core i7 Processors
အထူးသဖြင့် U မော်ဒယ်တွေကို Ultrabook လို ပါးပါးလပ်လပ် လက်တော့တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပြီး အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ပါဝါအစားနည်းနည်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် များများပေးချင်တဲ့ သဘောပါ။ H စီးရီးတွေကျ Desktop Level စွမ်းဆောင်ရည် ရဖို့အတွက် ပါဝါ Control ပိုင်း ဒီဇိုင်းပြောင်းဆွဲထားသလို Desktop Core i7-8700 နီးပါး စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် Desktop လောက်တော့ ဘယ်မြန်ပါ့မလဲနော်။
Ultrabook inspired by Intel U Series Processor
အခုလို Processor ရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပြီးသွားရင် အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာ Internet သုံးမယ်၊ Facebook နဲ့ Instagram သုံးမယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်ပဲဆိုရင် Core i3 ကိုမှ 8GB RAM ပါတာကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒီထက်ပိုသုံးချင်တယ် ဥပမာ ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်ဆိုရင် Core i5 သုံးလိုက်တာက Performance ပိုတက်သွားနိုင်သလို SSD တွေပါ ပါလာခဲ့ရင် Perfect ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောနိုင်နေပါပြီ။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ High-end ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Core i7 ကိုမှ 16GB RAM ၊ SSD စတာတွေနဲ့ ဆင်လိုက်ရင် Powerful Build ကွန်ပျူတာတလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
Sitting tight on ROG Gaming Motherboard
နောက်ပြီး Intel နဲ့ AMD ဘာကိုရွေးမလဲ အကြမ်းဖျင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Single Core စွမ်းဆောင်ရည်မှာ Intel အမြဲ အသာရလေ့ရှိပါတယ်၊ Thermal Instability ဖြစ်ခဲတယ်၊ Cooling လုံလုံလောက်လောက် သုံးထားရင်ပဲ Processor Throttling မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Intel ထက်စာရင် AMD ပို အားသာနေတာတွေက ဈေးသက်သာတယ်၊ တန်ဖိုးချင်းတူရင်တောင် Clock Speed ၊ Core Count ပိုများတယ်။ ဒီလိုကွာခြားချက်လေးရှိတဲ့အတွက် Ryzen လို Processor မျိုးသုံးချင်တယ်ဆိုရင် အပေါ်က အချက်လေးတွေအတိုင်း ချင့်ချိန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက် Gaming Laptop ၅ မျိုး
Laptop နဲ့ ဂိမ်းကစားဖို့ Graphics နဲ့ RAM ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ?